ရဲတိုက်များ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ရဲတိုက်များ
Updated: 2016-09-29 15:51
စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြော ရင် အရမ်း ကို ကျက်သရေရှိပြီး တော့ လှပပါတယ်။ အကြီး စား ပြင်ဆင် မှု ကြီး တစ်ခု ပြု လုပ် ပြီး ပိုမို လှပသေသတ်လာ တဲ့ နန်းတော်ကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ငွေငန်း က အတောင် ကို ဖြန့်...
Updated: 2016-07-12 14:06
အိဝခုနိ ရဲတိုက်ကြီး ( ရာမဂုချိ ခရိုင် ၊ ဂျပန် )
အိဝခုနိ ရဲတိုက် ၊ အိဝခုနိ တိုင်း ပထမ မင်းဆက် ဖြစ်တဲ့ (ခိစွတ်ခ၀ ဟိရော့အိအယ်) က တည်ဆောက် ခဲ့ တဲ့ ရာမရှိရော( တောင်ကိုအမှီပြုပြီး တည်ဆောက်ထားသောရဲတိုက်) ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုရာမ နန်းဘန်းဇွတ်ခု...
Updated: 2016-07-07 14:32
ဟာဂိ ရဲတိုက်မြို့တော် (ရာမဂုချိ ဂျပန် )
အယ်ဒို ခောတ် နှောင်းပိုင်း လောက်မှာ မျိုးချစ် ဟာဂိ စစ် သူရဲ တွေ က တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ တွင်း အသွင်အပြင် ကို လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ရှေးခောတ် ဆာမူရိုင်း စစ်သူရဲတို့ ရဲ့ နေအိမ် တန်းလ...
Updated: 2016-06-20 16:07
နိဂျော ရဲ တိုက် ကို အယ်ဒိုခောတ် မှာ တိုခုဂ၀ က ဆောက် လုပ် ခဲ့ တဲ့ ရဲ တိုက် တစ် ခု ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ၁၉၉၄ ခု နှစ် ၁၂ လပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့ ယဉ် ကျေး မှု အမွေအနှစ် ထိမ်း သိမ်းစောင့်ရှောက် ရေး နေရာ တစ် ခ...
Updated: 2016-06-16 16:03
ဂျပန်နိုင် ငံ မှာ နာမည် ကြီး တဲ့ ရဲ တိုက် ၃ ခု အနက် တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ ခုမမိုတို ရဲတိုက် ကို ခါတိုခိရောမာစ က ၇ နှစ် အချိန် ယူ ပြီး တည် ဆောက်ခဲ့ ပါတယ်။ ၉သိန်း၈သောင်း ဟဲဟိုးမီတာ ၊ ပတ်ပတ် လည် ၉ ကီလိုမီတာ ၊ အ...
Updated: 2016-04-25 14:57
အို ဘိ ရဲတိုက် မြို့ တော်
အိုဘိ ကလန် ၅သောင်း ၇ ထောင် ကျောက် တွေ ရဲ့ ရဲ တိုက်၊ ရေညှိ တို့ တက်ေ နတဲ့ ကျောက်တုံး နံ ရံ တွေ ကြီး မား လှ တဲ့ ဂိတ် ကြီး တွေ ရဲ့ အရှေ့ က ကျယ်ပြောလှ တဲ့ ကျောက် လှေ ခါး ၊ ရဲတိုက် ၊ သရဲ ခို အစ ရှိ သည်၊...